Izibonelelo zeSkram Master Certification
1. Fumana isiseko esiqinileyo solwazi lweSkram
2. Shintsha ingqondo yakho
3. Uya kuhlala ufanelekile kwaye ukhangele
4. Isikhwama seSikethi seSatifikethi sinceda inxaxheba yakho
5. Ukuchaphazela ukusebenzisana kwakho ukufumana indlela ye-Agile
6. Sebenza kangcono kunye noontanga bakho
7. Ukubonisa inkcazelo yakho yekhredithi kwi-Scrum kwiontanga
8. Joyina iqela leengcali zesikram
9. Gcina iiprojekthi kunye nabasebenzi abaqeqeshiwe
10. Isimboli senhlonipho
Ixesha lokuba yi-Certified Scrum Master
Yiba yi-Scrum Master
Isikram isisakhelo esilungileyo esichaza iqela, iibhalelwano kunye nejubane kwiiprojekthi ezinzima. Inceda amaqela ukuba azihlalutye kwaye aphucule ukuphucula ngokukhawuleza, ngokuhambelana nemigaqo ye-agile.
Iyindlela ephawulekayo esetyenziswayo kwihlabathi ngee-SME kunye nakwiizwe ngezizwe ngokufanayo; imibutho efana ne-Spotify, iMicrosoft kunye ne-Ericsson bonke basebenzise isikram. Kungakhathaliseki ukuba unobutsha kwiSkram, okanye unje ngongcali ongeyengqondo, nantsi i-10 inzuzo yeSikram seSatifikethi seMatriki:
Fumana isiseko esisisiseko seSkram ukufunda
Shintsha isimo sakho sengqondo
Uya kuhlala ufanelekile kwaye ukhangele
Isikhwama seSikethi seSatifikethi sinceda inxaxheba yakho
Ukuchaphazela ukusebenzisana kwakho ukufumana indlela ye-Agile
Sebenza kangcono kunye noontanga bakho
Ukubonisa inkcazelo yakho yekhredithi kwi-Scrum kwiontanga
Joyina iqela leengcali zesikram
Gcina iiprojekthi kunye nabasebenzi abaqeqeshiwe
Uphando olongezelelweyo kweeprojekthi ze-5,400 IT ezifumene isicwangciso senkcitho esele siphumelele sifezekisa i-45% ekuhambeni komsebenzi. Ngokuguqula ingcali kwiSkram, uya kuhlala kude nale mpuphu kwaye uphucule umtsalane wokugqiba iiprojekthi zakho ngokufanelekileyo nangethuba.
Iikhompyutyana ze-Scrum zezifundo kunye nezatifikethi ziyafumaneka, kodwa nakweminye, inzuzo ayifumananga ngokukhawuleza. Funda ukuze ufumane iingenelo Isiqinisekiso seSikram seMatriki.
Ngethuba lokuba awuzange uhlangabezane neSkram, ukufeza isatifikethi kuza kukubonisa ubuchule obukulindeleke ukuba ulisebenzise ngempumelelo. Ngethuba elihle lokuba iqumrhu lakho liqalise ukwenza i-Scrum methodology kwaye kufuneka ube nokufaneleka, ukufezekisa isatifikethi se-Scrum Master kuya kwakha isiseko sakho solwazi.
Ukuphumelela ngeSkram? Ukufeza isatifikethi se-Scrum Master kuza kuzalisa nayiphi na imingxuma onokuyenza kwiSkram yakho. Zonke izinto ezicatshangelwayo, kuya kufuneka ucinge ngengxenye nganye yeSkram ukuba udlule ukuhlolwa kweemviwo.
Isikram siyindlela yokwahlula kwaye ukuyisebenzisa ngokufanelekileyo kufuneka ufumane ingqondo engqondweni. Inxalenye ebaluleke kakhulu yokuzilawula nokuzikhusela ngendlela eqhelekileyo kukuba iqela elinengqondo engqondweni.
Ukulungiswa kunye nesitifiketi kuya kuguqula le meko wena kunye namaqabane akho. Njengeqela uza kuba namandla okucinga ngendlela ehambayo, ekhuthaza ukuphikisana okuncinci, ukuqhotyoshela iqela elincinci kunye neeprojekthi ezinonophelo.
Izatifikethi ziyindlela eyoyikisayo ukuzithengisa wena kubaphathi kwaye ubonise amaqabane kunye nabaqondisi ukuba uyayiqonda ngokupheleleyo intsimi.
Isikhwama seSatifikethi seMatyala siya kukhulisa ukuvuleka kwamagama ngaphezu kwanoma yimuphi umbutho osebenzisa iindlela ezimbi. I-Certification ibonisa ukuba unesimo sengqondo esilungileyo kunye nobuninzi bokufunda kwe-Agile, echaphazelekayo kumbutho ngamnye okanye kwishishini esebenzisa ezi zinto.
Ukwamkela enye indlela yinto ekhethekileyo kuyo nayiphi na ishishini kuba lichaphazela wonke umbutho: abantu, iinkqubo, abathengi kunye nolawulo.
Kule miqolo, kubalulekile kubo bonke abachaphazelekayo ukuba unokufezekisa ezinye izinto ezinokwenene kunye nezikhulu ngokukhawuleza. Ngezicwangciso ezingenangqiqo kunye neziphinda ziphinda zikhutshwe, amaqela okuzimelela, i-Scrum iyancipha ngokwenene kule nkalo.
Kukho nawuphi na, ukungabikho kokufunda kweSkram akunako ukuvelisa iziphumo ezithembisayo ukuba ulawulo luya kubangela. Ngaphandle kokuqinisekiswa kunye nokufunda okubalulekileyo kwandiswe kwinkqubo yokuqinisekisa, ungaphuthelwa iwindow ebalulekileyo ukuze ufumane isikram ehlabathini ngaphakathi kumbutho wakho.
Ulawulo luya kuziva luhle ngakumbi ukubeka izixhobo kwiSkram methodology ukuba kukho ukubonisa iingcali ezimbi njengokuba zikhoyo phakathi kwazo. Isiqinisekiso se-Scrum Master sibonisa ulawulo olulungele ukuqhuba indlela yeSkram.
Isatifikethi seSikhu seMatriki siya kuba nesiphumo esixhamlayo malunga nokusebenza kunye nabahlobo bakho. Qinisekisa kunye nabo osebenza nabo kunye kunye uya kuvelisa nokuqinisa isilumkiso esifanayo nesiseko sokuqonda kwesikram kwishishini lakho elikhethekileyo.
Kungakhathaliseki ukuba awuthathi i-Scrum course njengamaqabane akho, nangona yonke into uya kuzuza. Umqeqeshi ngamnye we-Scrum uya kutshintsha kwindlela yakhe yokufundisa kwaye oko uyazibona kuya kuhluka. Usenokuba ugxile kwiindawo ezahlukeneyo zeSkram.
Ekugqibeleni, uya kuba nekhono lokwenza isicatshulwa sakho sokuqonda okutshintshiweyo kweSkram kunye neendlela ezimbi.
I-Scrum Master Certification ibonisa oontanga bakho ukuba utyalombile ukunyusa, uthathwa njengeSkram kwaye ufunde ukuwusebenzisa ngaphakathi kumbutho wakho.
Akukho sizathu esichukumisayo sokuba uhlale unqwenela ukukhohlisa abahlobo owaziyo izinto zakho - unesiqinisekiso sokubonisa.
Jikela kwi-Master Scrum Master kwaye uza kujoyina iqela leengcali ze-Scrum ezibonwe zijolise ekutshintsheni okungenakutshintsha kunye neendlela ezimbi.
I-Scrum.org igxininisa inkqubo yehlabathi jikelele yabaqeqeshi beekram kunye nabaqeqeshi. Eli qela elinamandla lizaliswa njengelayibrari yolwazi, indlela yokufumana izihlandlo kunye nendawo ukufumana (kwaye unikeze) isikhokelo.
Kwimeko apho uphikisana ukuphumelela iiprojekthi, iqela le-Scrum Masters lingumvuzo omkhulu. Abathengi bakho banokuqonda ukuqikelelwa kweqela elinokubambisana kunye nokusebenzisa iSkram ngendlela enamandla.
Isatifikethi sisimboli senhlonipho emele iguqulwe. Ukongezelela, ukuba ungobuphathweni, ukuba abameli bakho balungiselelwe kwaye baqinisekiswe bakhombisa ukuqhuba kwakho kunye nomsebenzi wemisebenzi malunga nokufunda kwabo. Uza kufumana abasebenzi abaninzi abafundele ukuxhalabisa ukusebenzisa izicelo zabo ezintsha.
Njengoko ixabiso lihamba, "kwithuba elide lokuba ucinga ukuthenga umntu, uzilungiselele kwaye uhambe nabo bebiza kakhulu, bathabathe xa bebathengisa, bangazilungiseleli kwaye bahlale nabo."
Iba Master Skrum Master kwiintsuku ze-2 kuphela kwi-Innovative Technology Solution. Uyakulungiselela ngokuphindwe kabini isantya kwaye uhlale uvavanyo lwakho phakathi kokulungiselela - uphelele iingcali kunye namaqela adinga amakhono eSkram esheshayo.
Kwiintsuku nje ze-2
Ukuthelekisa phakathi kwe-PRINCE2 neSkram